Horohorontany : Namela takaitra teto Antsirabe
jeudi, 12 janvier 2017 09:49
Nihovitra ny tany halina. 5.3 amin’ny maridrefy Richter ny vaikany. Tany amin’ny 1 ora sy 7 minitra maraimben’ny alakamisy 12 janoary no nisehoany, ary tany amin’ny 46 km atsimo andrefan’i Betafo-Vakinankaratra, 170km atsimo-andrefan'Antananarivo no nisy ny foibeny.
Nisy fiantraikany ho an’ny manodidina an’Antsirabe, izay tsy lavitra loatra ny foiben’ilay horohorotany iny ny tranga. Teny amin’ny Fokontany Ambohimena sy Atsimontsena aloha no nahazoana tatitra teny amin’ny polisy fa nisy faharavana trano, izay mbola eo ampanamarinana izany ny rehetra hatreto.
Na izany aza dia efa nisy no nandefa sary tamin’ny tambajotran-tserasera ny fahavoazany araka ireto sary ireto. Ny toeram-pivarotana no nahazoana akony ihany koa satria dia nianjera avokoa ny entana teny amin’ireo talatalana ka potika tamin’izany ny tavoahangin-javapisotro rehetra raha araka ny sary ihany.
Best Online Pharmacy For Generic Viagra Comprar Cialis Pago Contra Reembolso [url=http://buycialonline.com]generic cialis[/url] Levitra Foglio Illustrativo
vendredi, 17 novembre 2017 00:10
Cialis Generika Potenzmittel Cialis Contrareembolso Foros [url=http://realviaonline.com]viagra[/url] Were To Buy Levothyroxine Cialis Lilly Nebenwirkungen
mardi, 31 octobre 2017 13:07
Propecia Culturismo Viagra Packstation [url=http://orderviapills.com]online pharmacy[/url] Cafergot Tablets Nz
Amoxicillin Causes Liver [url=http://bestviaonline.com]viagra[/url] Viagra Vendita
mardi, 10 octobre 2017 22:53
Orlistat Fast Delivery [url=http://buytadalaf.com]online pharmacy[/url] Cialis Pas Cher Nantes
Buy Prednisone Without Rx [url=http://buytadalaf.com]viagra cialis[/url] Kamagra Uk Next Day Delivery
vendredi, 07 juillet 2017 21:37